Izinzuzo zokudla ama-alimondi afakwe emzimbeni wakho wansuku zonke - Ukudla
Letha izinzuzo zokudla ama-alimondi afakwe emzimbeni wakho wansuku zonke
Ama-alimondi acwilisiwe angenye yezinto ezilula ukuzilungiselela. Bangeze ekudleni kwakho bese uvuna izinzuzo zama-alimondi ofakwe empilweni yakho.
Khumbula ukuthi, ezikoleni zakho zasesikoleni, umama wakho ayephoqa kanjani ama-alimondi agcwele emlonyeni wakho ngaphambi kokuba uye esikoleni? Noma ungalivula kanjani ibhokisi lakho le-tiffin, bese uthola elinye ibhokisi elincane elinama-alimondi afakwe ngaphakathi? Ingabe wake wazibuza ukuthi kungani ahlupha? Kungani bekubaluleke kangaka ukuthi udle ama-alimondi ambalwa afakwe emanzini? Umama wakho wayezazi izinzuzo zama-alimondi acwilile njengoba kwenza bonke omama nogogo bethu. Silapha ukukutshela ukuthi kungani izizukulwane zemindeni zithenga izinzuzo zama-alimondi acwilile ngaphandle kokwazi ngokuphelele ukuthi kungani zikhuthaza ukuwadla.
Ama-alimondi anokuthungwa okunzima futhi okunzima okwenza kube nzima ukugaya. Ukumunca ama-alimondi kuyazithambisa, kwenze kube lula emzimbeni wakho ukugaya nokuwohloka. Ama-alimondi acwilisiwe kulula ukuhlafuna, ngakho-ke ukwandisa ukutholakala komsoco wenathi.
Izinzuzo zama-alimondi afakwe maningi. Ama-alimondi afakwe emanzini angompetha abangaphansi kweshadi lokudla. Futhi kunezindlela eziningi ezingazami ukuzitholela lezi zinzuzo zama-alimondi acwilile. Ukuthi ufuna ukudla okulula phakathi kokudla noma uyafuna uhlobise i-dessert yakho , ama-alimondi acwilile ayindlela yokuhamba! Lamantongomane amancane agcwele umsoco ofihliwe esesizowembula, futhi ukuwamanzisa kukhipha amandla awo aphelele.
Sibhale izinzuzo zama-alimondi afakwe lapha, ngakho-ke uyazi ukuthi kufanele ucwilize idlanzana kusihlwa!
1. Usizo Lokwehlisa Isisindo
ezimbili. Vikela Ngokulimala Kwamaseli
3. Agcwele NgeMagnesium
Isine. Izinga Eliphansi Le-cholesterol
5. Thuthukisa Umsebenzi WeBongo
6. Kuhle Esikhunjeni Sakho
Ama-alimondi anama-carbohydrate amancane futhi anamaprotheni amaningi kanye nefayibha, okwenza kube isidlo esihle kakhulu lapho uthola ama-munchies. Amaphrotheni kanye nefayibha kuyaziwa ukuthi kukhulisa umuzwa wokugcwala, wokusutha, ngaleyo ndlela kunciphise isidingo sakho sokudla okuthile. Uma ufuna ukuxosha indlala yakho kanye nesifiso sakho sokudla, cwilisa ama-alimondi acwilile! Ezinye izifundo zize ziphakamise ukuthi ukudla amantongomane kungakhuphula kancane imetabolism, kubenze kube ukungezwa okuhle ekudleni kokunciphisa isisindo okusebenzayo.
ICEBISO: Kungcono ukudla ama-alimondi ambalwa afakwe ekuseni ekuseni ngo nsuku zonke , ukusiza ukunciphisa ukudla kwakho kwekhalori kosuku.
2. Vikela Ekulimaleni Kwamaseli
Isikhumba esimuncu se-alimondi sicebe kakhulu ngama-antioxidants anamandla. Ama-antioxidants, ikakhulukazi uvithamini E, ayaziwa ukuvikela amaseli akho ekulimaleni okwenziwe nge-oxidative. Ukulimala okwenziwe nge-oxidative kudala ukulimala kwesikhumba nokuguga. Ama-antioxidants anciphisa izimpawu zokuguga futhi kukuvikele esikhunjeni umonakalo. Umuntu angasho ukuthi ama-alimondi acwilile anjengekhambi lobusha!
ICEBISO: Hlafuna kahle ukuze wandise ukudla okunomsoco. Ucwaningo luthi ukwephula ama-alimondi abe yizicucu ezincane (ukuhlafuna), kuvumela izakhamzimba eziningi ukuthi zikhishwe futhi zimunce, ikakhulukazi amafutha anempilo.
Ama-alimondi acwilisiwe awumthombo omuhle we-magnesium. Kunconywa ukuthi abantu abanengcindezi yegazi ephansi badle ama-alimondi njengoba amazinga aphansi we-magnesium exhunywe kakhulu nomfutho wegazi ophakeme. Ukusetshenziswa kwama-alimondi kusiza ekugcineni ibhalansi yamazinga we-magnesium, nawo-ke, azosiza ukulawula umfutho wegazi. IMagnesium iphinde inikeze ukuthuthuka okukhulu kwesifo se-metabolic kanye nohlobo 2 lwesifo sikashukela. IMagnesiyamu iyiminerali ebalulekile edingwa abantu emizimbeni yabo, kepha imvamisa abakwazi lokhu!
ICEBISO: I-ounce lama-alimondi ngaphambi kokudla isidlo esisindayo se-carbohydrate kungaholela ekwehlisweni kwe-30% emazingeni e-glucose yangemva kokudla kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
4. Izinga Eliphansi Le-cholesterol
Abantu abaningi bakholelwa ngephutha ukuthi i-cholesterol ayilunganga emizimbeni yethu, kodwa, empeleni, kunezinhlobo ezimbili ze-cholesterol, enhle nembi. I-cholesterol engalungile efana ne-LDL ixhunyaniswe nesifo senhliziyo nezimo eziningana zempilo ezinzima. Ama-alimondi afakwe emanzini anamafutha amaningi angagcotshwanga anciphisa i-cholesterol ye-LDL ngenkathi igcina i-HDL, i- cholesterol enhle . Ukudla idlanzana le- ama-alimondi nsuku zonke kungaholela ekunciphiseni okuncane kwe-cholesterol embi, ukunciphisa ingozi yesifo senhliziyo nokukhulisa impilo yenhliziyo.
ICEBISO: Pheka ukudla okulula okususelwa e-alimondi ukukhuthaza ukusetshenziswa kwe-alimondi endlini yakho.
Le yi-oldie kodwa i-goodie! Sonke sizwile kubazali bethu nogogo nomkhulu ukuthi ama-alimondi akwenze uhlakaniphe, akwenze wadla nama-alimondi ngezinsuku zezivivinyo, kodwa akekho noyedwa owalungisa isayensi ngale nkolelo! Yingakho ukudla ama-alimondi empeleni kungumkhuba omuhle wokutshala: uvithamini E, okhona kuma-alimondi, ukhonjisiwe ukuvimbela ukwehla kwengqondo. Kuyasiza futhi ekugcineni imemori. Ucwaningo luye lwagqamisa i- izinzuzo zama-alimondi ngokusebenza kangcono kobuchopho.
ICEBISO: Phuza ingilazi yobisi olufudumele lwe-turmeric ngama-alimondi akho afakwe emanzini - yi-duo engcwele yomndeni waseNdiya. I-Turmeric kukholelwa ukuthi iyasebenza ekubambezeleni ukwehla okuhlobene nobudala ekusebenzeni kobuchopho, kuyilapho ama-alimondi ethuthukisa inkumbulo yakho!
6. Silungele Isikhumba Sakho
Lokhu kungenye i-classic evela encwadini kagogo yakho yezeluleko namasu okuzenzela. Amaphakethe wobuso asuselwa e-Almond ayindlela enhle yoku ukugcina isikhumba sakho siphilile . Abesifazane bathembele kule ndlela yokwelashwa yobuhle iminyaka eminingi (kusengaphambi kokuba buso obususelwa kumakhemikhali obunamaphakethe amahle bube khona) ukuvuselela isikhumba sabo. Imaski yobuso be-alimondi iza nezinzuzo zokondla nokunciphisa izimpawu zokuguga.
Nansi imaski yobuso be-alimondi eyisisekelo ezoba intandokazi eqinisekisiwe: hlanganisa ndawonye ama-alimondi agcwele nobisi oluhlaza, bese ufaka unamathisela ebusweni nasentanyeni yakho. Vumela ukuthi yome, bese ugeza ngamanzi abandayo. Ukusetshenziswa kwaleli phakethe kwenza izimangaliso zesikhumba sakho, ukusigcina sibushelelezi futhi sithambile. Iphakethe lingasetshenziselwa ukwelapha ukuvuvukala kwesikhumba.
ICEBISO: Ama-alimondi acwilisiwe angenza izimangaliso zezinwele zakho kanjalo. Ukusetshenziswa kwesifihla-buso sezinwele ngama-alimondi ofakwe kwengeza izinwele zakho futhi zikhazimule. Inikeza izakhamzimba ezinweleni zakho, ivimbele ukonakala kwezinwele nokulawula ukuwa kwezinwele.
Q. Yini Engcono: Ama-alimondi Aluhlaza noma Ama-alimondi Afakwe emanzini?
TO. Ukukhetha phakathi kwama-alimondi acwilisiwe nama-alimondi aluhlaza akuyona nje indaba yokunambitha kumayelana nokukhetha inketho enempilo. Ukucwilisa ama-alimondi akugcini nje ngokubenza babe mnandi ekudleni noma kube lula ukugaya, kubenza kube lula ukuhluza. Ngenkathi isikhumba se-alimondi sigcwele ama-antioxidants asiza ekulweni ne-cholesterol embi, futhi iqukethe i-tannin. I-Tannin yaziwa ngokuvimbela ukumuncwa kwezakhi. Ukucwilisa ama-alimondi kwenza kube lula ukukhipha ikhasi, okuvumela amantongomane ukuthi akhulule wonke umsoco kalula.
U. Iyiphi Indlela Engcono Kakhulu Yokulungisa Ama-alimondi Amanzi?
TO. Ukucwilisa ama-alimondi kungumsebenzi olula kakhulu. Faka ama-alimondi esitsheni, engeza inkomishi yamanzi (noma inani lamanzi elihlanganisa ama-alimondi ngokugcwele), bese uwavumela ukuthi acwilise amahora amane kuya kwamahlanu. Voila! Ama-alimondi akho afakwe ngomumo alungele ukuhamba. Lena inqubo engasetshenziswa uma ungenaso isikhathi esiningi ezandleni zakho. Indlela enhle, noma kunjalo, yokulungisa ama-alimondi afakwe emanzini kudla isikhathi esithe xaxa kepha, futhi, kubandakanya umzamo ocishe ungabi ingxenye yakho.
Beka idlanzana lama-alimondi esitsheni, engeza amanzi afudumele kuze kube yilapho ama-alimondi ehlanganiswa ngokuphelele, bese ufafaza ingcosana kasawoti. Vala isitsha bese uvumela ama-alimondi ukuthi acwilise ubusuku bonke (amahora ayisishiyagalombili kuya kwayi-12). Ngosuku olulandelayo, khama bese ushaya ama-alimondi omile ngaphambi kokuba uqale ukuginya. Le nqubo isiza ukuthuthukisa ukungena kwezakhi zomzimba lapho usebenzisa ama-alimondi.
U. Mangaki Ama-alimondi Angamanzi Okufanele Ngiwadle Nsuku Zonke?
TO. Ukudla kwakho ama-alimondi ofakwe emanzini kuncike emzimbeni wakho, izinto ezifana nesifiso sakho sokudla, izidingo zakho zekhalori zansuku zonke, nezinga lomsebenzi wakho. Njengomthetho ojwayelekile, ukuthola imiphumela efanelekile, yidla okungenani ama-alimondi agxishiwe ayisishiyagalombili kuye kwayishumi nsuku zonke.
Ama-alimondi acwilisiwe ayengeza kakhulu ekudleni kwakho kwansuku zonke. Bacebile kuzakhamzimba eziningi njengevithamini E, ifayibha yokudla, i-omega 3 fatty acid, i-omega 6 fatty acid, namaprotheni. Iphrofayili yezakhi ezicebile ze lokhu kudla okuphezulu yilokho okwenza kube yinadi elakhayo kuyo yonke iminyaka!
Futhi bona: Izinzuzo ezinhlanu zamafutha alimondi amnandi
amakhambi asekhaya okuwa kwezinwele nokubuyela emuva
ikhambi lemvelo lokubuyisa izinwele
ungamisa kanjani impandla uphinde uvuselele izinwele ngokwemvelo
amathiphu amahle wobuhle ekhaya
yikuphi ukuzivocavoca okufanele ukwenze ukunciphisa amafutha esiswini